Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga esentabeni: Iflethi okanye indlu ekwicomplex - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga esentabeni: Iflethi okanye indlu ekwicomplex
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTobias
Iflethi inekhitshi elitsha elivulekileyo, kuquka I-microwave nomatshini wokwenza ikofu, igumbi lokuhlambela elitsha, lalamaxesha kunye nendawo yokuhlala etofotofo enendawo yokubasa umlilo kunye negumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini. Le flethi inetreyini apho unokubona kakuhle iintaba. Ukongezelela, igumbi le-yoga, i-sauna (PG € 30), ipuli yamanzi asentwasahlobo, indawo yokubukela imidlalo yeqonga, kunye nelaphu elikhulu elinegrili nesitya somlilo nazo zingasetyenziswa. I-Snowshoes iyafumaneka nayo.
Ukuze ufike kwindlu, kufuneka kusetyenziswe indlela yehlathi.
Ungapaka kwindlu okanye phambi kwayo. Kukwakho nesikhululo sokutshaja iimoto zombane (ukusetyenziswa kweemoto eziya kubhatalwa ngumqeshi).
Ukunikela ingqalelo: Indlu ayikwazi ukufikelela kwizithuthi zikawonke-wonke! Kubalulekile ukuba ufike ngemoto yakho. Ebusika, ufanele uyibhukishe kuphela iflethi okanye indlu ekwicomplex ukuba unemoto enamavili. Ekubeni ukususwa kwekhephu yonke imihla kungenakuqinisekiswa, amatsheyina ekhephu asenokufuneka.
Izikhokelo ezichanileyo ziza kuthunyelwa emva kokuba ubhukishile, ngaphambi kokuba ufike.
Iflethi ibekwe kwindawo yamaphupha entabeni phakathi kwemithi. Abamelwane ngqo bangabahlali bamahlathi kuphela kwaye ehlotyeni kukho iinkomo ezimbalwa kwifama engaphantsi kwegadi. Oku kukuvumela ukuba wonwabele uxolo kwaye ulibale uxinezeleko lobomi bemihla ngemihla.
Ngasemva kwendlu, iindledlana zokuqala zokunyuka intaba ziqala. Ukusuka kwindawo yokupaka enkulu ekufutshane kukho iindlela ezininzi ezintle.
Idolophana encinci ekufutshane imalunga nemizuzu eyi-10 ngemoto kwintlambo. Kukho iivenkile ezimbalwa ezintle apho unokuzonwabisa khona ngokutya kwaseBavaria. Nangona kunjalo, akukho mathuba okuthenga apho. Ezi zinokufikelelwa ngemoto kwimizuzu eyi-20 kwidolophu enkulu elandelayo i-Inzell.
Umgama ngemoto ukuya kwiindawo ezikufutshane:
I-Bad Reichenhall: Imizuzu eyi-25
I-Berchtesgarden: imizuzu eyi-40 I-Chiemsee: imizuzu eyi-30 ukuya
kweyi-45 I-Rosenheim: ngaphantsi nje kweyure
I-Salzburg (eAustria): imizuzu eyi-45-50
Umbuki zindwendwe ngu- Tobias
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Schneizlreuth